तिङ्लामा प्रदेश र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा पनि ‘नो भोट’ ! « Naya Page
तिङ्लामा प्रदेश र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा पनि ‘नो भोट’ !
काठमाडौं : पुनःसंरचनामा चित्त नबुझेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ‘नो भोट नो क्यान्डिडेट’ भन्दै बहिष्कार गरेका साबिक तिङ्ला गाविस (हालको नेचासल्यान गाउँपालिका–६)का स्थानीयले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सहभागी नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । उनीहरूको माग सम्बोधनको कुनै छनक नपाएपछि यस्तो सम्भावना बढेको स्थानीय बताउँछन् । यो खबर सन्तोष राउतले आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेका छन्।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनसमेत गरेका तिङ्लावासीले यस पटक पनि माग सम्बोधन नभए अब हुने निर्वाचनमा समेत भाग नलिने बताएका छन् । सोलुखुम्बुको तिङ्लालाई नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समावेश गरेर उत्पीडनमा पारेकोमा आन्दोलन गर्दै चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । सदरमुकाम पुग्न बढीमा २० मिनेटको मोटर बाटो छ भने हालको गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न कम्तीमा पनि पाँच घण्टा लाग्छ । काठमाडौँलाई तिङ्ला हुँदै सदरमुकामसम्मको सडकले जोडेको छ भने सो गाउँपालिका केन्द्र पुग्न भने भिरपहराको कच्ची सडक पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘अब हुने निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने अहिले निश्चित भएको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सबै कागजी प्रक्रिया पु¥याएर पठाइएको छ र माग सम्बोधनको प्रतक्षिामा छौँ । माग सम्बोधन भए निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ नभए लिदैनौँ’, तिङ्लाका नेपाली काँग्रेसका सभापति नैनबहादुर कार्कीले भने,। उनका अनुसार नेचासल्यान गाउँपालिकाको दूधकुण्ड नगरपालिकामा जाने सहमति दिएको छ भने दूधकुण्ड नगरपालिकाले आउन दिने सहमति मन्त्रालयमा बुझाएको जनाइएको छ । ङ्लामा ९४५ घरधुरीका दुईहजार ४७६ मतदाता छन् ।